Madaxweyne Farmaajo iyo Guterres oo wadajir bulshada caalamka ugu baaqay ka qeyb-galka gurmadka abaaraha Soomaaliya – WARSOOR
Muqdisho – (warsoor) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta la kulmay Xog-yaha guud ee Qaramada Midoobey iyo wefdi uu hoggaaminayo oo yimid magaalada Muqdisho.
Antonio Guterres Xog-hayaga guud ee Qaramada Midoobey markii uu yimid Muqdisho, waxaa soo dhoweeyey wasiirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya kaddibna uu kulan gaar ah la qaatey madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweyne JFS mudane Maxamed Cabdullaahi Faraamajo iyo Mudane Guterres ayaa ugu horreyn ka hadlay xaaladaha adag ee abaaraha ka jira Soomaaliya oo aad u sii darsadey, madaxweynaha ayaa u sheegay in abaartu aysan xilligaan u baahneyn hadal keliyah oo ay tahay in si dhab ah wax looga qabto.
Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya, C/salaam Hadliye Cumar, Ergeyga gaarka ah ee Q.M Soomaaliya u qaabilsan Michel Cheating Safiirka Soomaaliya ee Q.M u fadhiya Yuusuf Garaad Cumar iyo Saraakiil ka socotay hey’adaha gargaarka bini’aadannimo ee Q.M.
Madaxweynaha ayaa sheegay in uu kala hadlay Xog-yaha Q.M ay arrimaha amniga, qorshaha dowladda uga degan, dhismaha ciidanka iyo la dagaallanka argagixisada oo uu sheegay in laga qaadi doono tallaabbo ay ku mideysan yihiin dowladda iyo saaxiibada Soomaaliya.
Madaxweyne farmaajo “dowladeyda waxa ay ahmiyada kowaad siineysaa gurmadka abaaraha”